प्रत्येक कीवर्ड लक्ष्यीकरण प्रति SEO लागत के छ?
आजकल, लगभग सबै व्यवसायहरु लाई यो निर्णय गर्न को लागी छ कि उनि खोज इन्जिन अनुकूलन मा कितनी धन को निवेश गर्नु पर्छ. सबैलाई थाहा छ कि एसईओ व्यवसायको अस्तित्वको लागि आवश्यक छ, तिनीहरू अप्टिमाइजेसन सेवाहरूमा आफ्नो राजस्वको सबैभन्दा ठूलो रकम खर्च गर्न तयार छन्।. तथापि, एक सम्भावित अनलाइन व्यापारीले आफ्नो बजेट योजना बनाउनु पर्छ. यही कारण यो प्रश्नको जवाफ दिनको लागि "यो एसईओमा कति खर्च हुनेछ?" बरु यो समस्याको लागि कुनै सटीक जवाफ छैन. खोजी इञ्जिन अनुकूलन मापन गर्न सजिलो छैन किनकि धेरै मार्केटिङ गतिविधिहरूले कार्बनिक खोजी ट्राफिकलाई असर पार्न सक्छ - elgydium toothpaste formula. साथै, एसईओ सेवाहरूको लागत सम्भावित पुरस्कारमा निर्भर हुन सक्छ. उदाहरणका लागि, राष्ट्रिय स्तरमा अत्यधिक प्रतिस्पर्धी खोजशब्दहरूको लागि जहाँ प्रति कीवर्ड एसईओ लागत $ 10 हुन सक्दछ यसको तुलनामा यसको कम लागत हुनेछ, कम प्रतिस्पर्धी स्थानीय कीवर्डको लागि।. यसको मतलब यो हो कि तपाईंको अनुकूलन अभियान को भौगोलिक स्थान मा अंतिम मूल्य मा पनि असर हुनेछ.
यस छोटो लेखमा, म तपाईंलाई जवाफ दिन्छु "एसईओमा तपाई कति खर्च गर्नुहुन्छ?". यसबाहेक, म तपाईंलाई एसईओ एजेन्सीहरू तपाईंलाई उत्तम एसईओ परिणामहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्न कसरी काम गर्दछ भन्ने बारे केही उपयोगी सल्लाह दिन्छु.
एसईओ भुक्तानी मोडेल
तपाईको वेबसाइट अनुकूलन को लागी सर्वश्रेष्ठ बजेटिंग को चयन गर्न को लागी, मैले तपाईंलाई एसईओ एजेंसियों द्वारा उपयोग केहि बुनियादी भुगतान मोडेलहरु लाई दिखाने को निर्णय लिया.
यस भुक्तानी मोडेलको अनुसार, तपाईंलाई सेवाको लागि मासिक शुल्क तिर्न आवश्यक छ।. मासिक एसईओ प्याकेजको लागि कुनै थप शुल्कहरू छैनन्. तपाईलाई केवल अनुकूलन सेवाहरूको सहमत पारिएको array को लागि तिर्न आवश्यक छ. एसईओ को लागि मासिक शुल्क भुक्तानी को सबै भन्दा सुविधाजनक तरीका हो किनकी यसले एक अवसर को लगातार वेबसाइट रैंकिंग मा सुधार र निवेश मा फिर्ता बढावा दि्छ. मासिक सेवा सामान्यतया विश्लेषणात्मक रिपोर्टहरू, नयाँ कीवर्ड सुझाव, लिङ्क निर्माण र साइटमा सुधार सुधारहरू समावेश गर्दछ.
अनुबंध सेवाहरु एसईओ एजेन्सीहरु द्वारा प्रदान गरिएको एक पारंपरिक अनुकूलन विधि हो. सामान्यतया, यो प्रकारका सेवाहरूसँग एक निश्चित मूल्य छ. सामान्यतया, वेबसाईट मालिकहरू मासिक रेजिनर संलग्न गर्न तयार हुनु अघि, तिनीहरू ठेकेदार सेवाहरू चयन गर्नेछन् जुन तिनीहरू पूरा गर्न चाहन्छन्. मूल्य निर्धारण सबै सेवाहरू, साथै प्रति कीवर्ड एसईओ लागत, अनुकूलन एजेन्सी साइटमा राखिएको छ. त्यसैले, तपाइँ अर्डर गर्नु अघि सबै कुरा जाँच गर्न सक्नुहुनेछ. अनुबंध सेवाहरूको उदाहरणको रूपमा, म खोजशब्द अनुसन्धान, प्रतिस्पर्धी विश्लेषण, र वेबसाइट त्रुटिहरू फिक्सिंग गिनती गर्न सक्छु.
प्रोजेक्ट-आधारित मूल्य निर्धारण
कस्टम परियोजनाहरू विशेष गरी ग्राहकको आवश्यकताको लागि सिर्जना गरिन्छ। तिनीहरूको मूल्य एक परियोजना, बजार आला र प्रोजेक्ट जटिलताको साइजमा फरक पर्न सक्छ. सामान्यतया, प्रोजेक्ट शुल्कहरू अनुबंध सेवाहरूसँग समान छन्. एसईओ एजेन्सीसँग व्यापार मालिकहरू सँगै विशेष परियोजनाको दायरा र लागतमा निर्णय गर्छन्. परियोजना आधारित अनुकूलन स्थानीय वा हालैको सुरुवात व्यवसायको लागि उत्तम संस्करण हो जुन यसले अनलाइन अनलाइन उपस्थिति सुधार गर्न र गुणस्तर ट्राफिकलाई आकर्षित गर्न मद्दत गर्दछ.
केहि एसईओ एजेन्सीहरुलाई वेबसाइट मालिकों लाई आफ्नो साइट मा केहि एसईओ तत्वहरु लाई सुधार गर्न को लागी परामर्श सेवाहरु प्रदान गर्दछ र एक विजेता अनुकूलन को निर्माण उनीहरूको आफ्नै अभियान. यो प्रकारका सेवाहरूमा एक घण्टाको शुल्क छ.